Wasaaradda Cadaaladda oo isu diyaarineysa iney soo dhisto Guddiga Ladagaalanka Musuqa – Kalfadhi
Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka Soomaaliya, Xasan Xuseen Xaaji, ayaa sheegay iney bilaabayaan iney soo magacaabaan Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee Madax-banaan, durbadiiba uu Golaha Shacabku meel mariyo wax-ka-bedelkii uu Golaha Aqalka Sare ku sameeyey Hindisaha Xeerka Guddigaas lagu soo dhisayo Guddigaas. Aqalka Sare waxa uu Hindisahaas ansixiyey shalay.
Wasiirku waxa uu sheegay in muhiimadda uu Guddigaas u leeyahay dalka awgeed ay qasab ka dhigeyso inaan lala daahin in la soo dhiso. “Waajibka yaree uga haray (Hindisaha Xeerka Guddiga Ladagaalanka Musuqa) Golaha Shacabka waxaan u rajeeneynaa iney ka gutaan, kadibna aan sidaas ku soo magacawno Xubnihii Guddiga” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka, Xasan Xuseen.
Wasiirku waxa uu sheegay in faa’iidada, Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa, uu Soomaaliya u leeyahay ay ka dhigeyso Hindisaha Xeerka Dhismaha Guddigaas mid aad loogu baahan yahay. “Waa sharci aad iyo aad loo sugaayo, oo uu dalkeena u baahan yahay. Waajibka uga horay Golaha Shacabka haddii ay ka gutaan sidaas inuu ku dhaqan-galo ayaan rajeeneynaa” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda iyo Garsoorka, Xasan Xuseen Xaaji.
Hindisaha Sharciga Dhismaha Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan waxaa soo curisay Xukumadda, waxaana markii ay soo meel marisay kadib loo keenay Golaha Shacabka, oo inta ka shaqeeyey meel mariyey, shalay ayuuna Golaha Aqalka Sare ansixiyey, kadib in muddo ah oo uu isaguna ka shaqeynayey. Hadda waxa uu dib ugu soo noqonayaa Golaha Shacabka, oo markuu ansixiyo markale u gudbin doona Madaxweynaha, oo saxiixi doona kuna soo saari doona faafinta rasmiga ah, markaas kadib ayuuna moqon doonaa Xeer soo dhisi kara Guddiga Ladagaalanka Musuq-maasuqa ee Madaxa-banaan.